OSHO / RAJNEESH MOVEMENT
1931: Osho / Bhagwan mụrụ dịka Mohan Chandra Rajneesh na Kuchwada na mbara ala ndị India.
1953: Rajneesh nwetara nghọta ime mmụọ n'okpuru osisi dị na Ogige Bhanvartal, Jabalpur.
1958-1966: Rajneesh natara oge ọhụhụ ma si na Lecturer gaa Prọfesọ (1960) na Mahadum Jabalpur.
1966: Rajneesh gbara arụkwaghịm na Mahadum Jabalpur wee buru aha ya bụ Acharya (Onye Ozizi), mgbe ndị na-akwado ya guzobere ntụkwasị obi mmụta iji kwado okwu nkuzi na ogige ntụgharị uche ime obodo.
1970: Rajneesh malitere izizi ndị na-eso ụzọ ya).
1971: Rajneesh bu ụzọ kpọọ onwe ya Bhagwan (onye nwere nghọta) Shree Rajneesh.
1974: E guzobere Shree Rajneesh Ashram na Pune.
1977: Rajneesh Movement zuru ụwa ọnụ ruru ihe dị ka ndị ọrụ ntinye 25,000. E nwekwara ebe obibi na azụmaahịa dị na ma ọ bụ n'akụkụ nnukwu obodo ukwu ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Europe na America.
1981: July 10: Ma Anand Sheela, odeakwụkwọ nke Rajneesh, nọchitere Rajneesh ma zụta 64,229 Big Muddy Ranch na Central Oregon maka $ 5.9 nde USD na Bhagwan rutere izu isii ka e mesịrị.
1981 (October): Ejiri Big Muddy dị ka Rajneeshpuram.
1981: N'ikwu banyere iwu ojiji ala nke ala, ọtụtụ puku ndị Enyi nke Oregon, otu ndị nwere mmasị ọha na eze na nkwado dị ukwuu site n'aka onye na-ahụ maka Nike bụ Bill Bowerman, gbara akwụkwọ ikpe megide njikọ ahụ.
1982: Rajneeshees biri na Antelope, obere obodo kacha nso Rajneeshpuram, nke dị kilomita iri na asatọ ma ha meriri ntuli aka nke ọchịchị, na-achịkwa obodo ahụ nke ọma.
1983 (Ọktọba): Oregon Attorney General David Frohnmayer nyere echiche ma gbaa akwụkwọ ikpe na-ama aka na ntinye akwụkwọ nke Rajneeshpuram n'ihi mmebi nke nkewa nke Iwu nke Churchka na Ọchịchị.
1984 (July): Rajneesh malitere ịkụziri obere mmadụ okwu a na-akpọ Choro ole na ole, na-agbachi nkịtị na nzuzo nke malitere na
1984 (Septemba): Ndị mgbasa ozi nke mba zigara ndị ọrụ iji kpuchie ndị na-enweghị ebe obibi 2,000, ọkachasị ụmụ nwoke, bụ ndị akpọrọ ma banye bọs na Rajneeshpuram. Ndị na-efe ofufe kwuru na atụmatụ Mepụta -lọ-E gosipụtara etu esi emezi ndị mmadụ.
1984 (Septemba): Rajneeshees butere otu ọgụ bioterrorist kachasị na ala US. Salmonella nke fesara n’elu ebe a na-ere salad rịa ọrịa n’elu mmadụ 750 nọ na oche Wasco County, Dalles. Nke a bụ ule nke atụmatụ iji mebie ụlọ mmanya salad iji gbochie ndị ịtụ vootu na-emegide Rajneesh na ntuli aka mpaghara nke Nọvemba.
1984 (October 13): Onye odeakwụkwọ nke Oregon guzobere usoro pụrụ iche iji gbaa ndị na-achọ maka aha ndebanye aha ọhụrụ na Wasco County ajụjụ ọnụ. Rajneeshees weghaara ntuli aka nke ógbè ahụ na n'ime otu ọnwa ihe na-erughị ndị na-enweghị ebe obibi 50 nọgidere na Rajneeshpuram.
1985 (Septemba 13): Sheela na ndị òtù ya gbapụrụ na Rajneeshpuram. Onye isi obodo nke Rajneeshpuram mechara bụrụ onye akaebe gọọmentị etiti.
1985 (Septemba 16): Rajneesh boro Sheela ebubo n'ihu ọha na ịnwa igbu mmadụ, na-achịkwa nsị 1984 na Dalles, mmeso ọjọọ nke ndị na-efe ya na atụmatụ bọmbụ. Ọ kpọrọ ndị isi obodo na ndị gọọmentị etiti na Rajneeshpuram ka ha nyochaa ebubo ya.
1985 (October 28): Thelọikpe Federal District na Oregon kwadoro Ọchịchị na State nke Oregon v. Obodo nke Rajneeshpuram na mmebi nke nkewa iwu nkewapu ofka na nke obodo.
1985 (October 28): E jidere Rajneesh na Charlotte NC, mgbe ọ na-anwa ịgbapụ USA.
1985 (November 2): Rajneesh rịọrọ ka ọ ghara ịlụ ọgụ na ọnụ ọgụgụ abụọ nke mpụga mbata na ọpụpụ wee hapụ USA.
1985 (Disemba 12): Rajneesh malitere na "World Tour" na ndị òtù ya, na-achọ ịtọlite ​​Ashram na Western Europe, South America ma ọ bụ North India.
1986: E wepụtara Sheela site na Germany. Ya na onye ya na ya so gbakọtara ọnụ rịọrọ ka ha gbalịa igbu mmadụ, na-egbu ndị ọrụ gọọmentị abụọ na-egbu egbu, na-agba ụlọ ọrụ gọọmentị ọkụ, ma na-ehiwe usoro ntinye ekwentị na usoro ekwentị. A mara ya ikpe ịga mkpọrọ afọ iri abụọ na anọ na Federal ma kwụọ ụgwọ ngụkọta nke $ 470,000.
1987 (Jenụwarị): Rajneesh kpara nkata na gọọmentị India ma nye ya ohere imeghe Ashram ochie ya, mgbe ọ kwesịrị ịkwụsị ọnụ ọgụgụ nke ndị Ashram zuru oke na oge nwa oge.
1988 (Disemba 13): A tọhapụrụ Sheela mgbe ọ nọrọ afọ abụọ na ọkara n'ụlọ mkpọrọ Federal wee pụọ ozugbo Switzerland tupu State nke Oregon nwere ike inye iwu ka ejide ya maka mpụ ndị ọzọ.
1989 (August): Rajneesh gbanwere aha ya Osho Rajneesh. Na Septemba ọ bụ naanị Osho, nke pụtara mmetụta nke oke osimiri ma ọ bụ gbakwunye ụwa.
1990 (Jenụwarị 19): Osho nwụrụ (hapụrụ ozu ya).
1999: Ma Yoga Neelam, onye odeakwụkwọ nke Osho nke ikpeazụ na ndị ọzọ na-efe ya gbara arụkwaghịm wee hapụ Ashram ka ọ duru ndị na-atụgharị uche wee chọta Oshodham, obere etiti dị iri atọ na ndịda Delhi.
2009: Ikpe ikpe ikpe United States na Trademark Copyright Board kpebiri na òtù Osho dịka Oshodam na magazin ya Osho World nwere ike iji aha ahụ “Osho” ​​n'ihi na ọ dị otú ahụ “Jizọs.” Olọ ọrụ Osho dị n'etiti, Osho International Foundation, jigidere ikike niile mbipụta nwebiisinka.
2014: Switzerland Federal Department of Internal Affairs weghachite ndị isi ise.
2014: Ihe karịrị 200 obere ebe obibi ntụgharị uche Osho na-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'ụwa niile. E bipụtala ihe karịrị otu puku na narị akwụkwọ ise n’asụsụ iri anọ. Pune Ashram na Oshodham na-aga n'ihu ileta ndị ọbịa ma na-enye ntụgharị uche na nzuko maka mmepe onwe onye na nke mmụọ.
A mụrụ Rajneesh na ezinụlọ Jain na Kuchawada, India, na 1931 wee kpọọ Mohan Chandra Rajneesh. (Jainism bụ otu nọọrọ onwe ya Okpukpe South Indian nwere njikọ chiri anya na Buddha.) Ọ nwetara MA na nkà ihe ọmụma na Mahadum Saugar ma were ọrụ ozugbo na Raipur Sanskrit College (Sanskrit Mahavidyalaya). Okwu nkuzi ya banyere nnwere onwe mmekọahụ na nkatọ ya banyere usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị India mere ka esemokwu dị ukwuu nke na Rajneesh zigara mahadum Jabalpar n'afọ na-esote, ebe ọ natara nkwalite na prọfesọ na 1960 (Carter 1990: 39). Mgbe klaasị adịghị na ya, ọ gafere India na-ekwu okwu banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmekọahụ, na ọnọdụ ime mmụọ.
Ndị ahịa nyere Rajneesh onyinye maka nyocha ọ bụla banyere mmepe ime mmụọ ha na ndụ ha kwa ụbọchị. Nke a bụ ebe a na-ahụkarị na India, ebe ndị mmadụ na-achọ nduzi site n'aka ndị mmụta ma ọ bụ ndị nsọ dị ka otu ụzọ ndị America nwere ike isi kpọtụrụ onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ ma ọ bụ onye ndụmọdụ ọzụzụ atụrụ, na omume nke Rajneesh abụghị ihe ọhụrụ n'onwe ya (Mehta 1979). Ka ọ na-erule afọ 1964, otu ndị bara ọgaranya na-akwado ego hiwere ntụkwasị obi mmụta iji kwado Rajneesh na izu ụka izu ụka ọ bụla na-atụgharị uche. Dị ka ọtụtụ ndị ọkachamara nke ndị ahịa ha na-eto ngwa ngwa, Rajneesh nwetara onye njikwa azụmaahịa n'oge a: otu klaasị, nwanyị nwere njikọ chiri anya, Ma Yoga Laxmi, onye bụ onye isi nhazi ya na odeakwụkwọ onwe ya.
Rajneesh gbara arụkwaghịm n'ọrụ ya na Mahadum Jabalpur na 1966 n'ihi esemokwu banyere mkpebi ya megide Janata Party na ịkwado nnwere onwe mmekọahụ. Ọ malitere iji aha ya bụ Acharya Rajneesh, na-egosipụta ọrụ ya dị ka onye nkuzi ime mmụọ, na-akwado onwe ya site na nkuzi, na-enye ogige ntụgharị uche, na ndị ndụmọdụ bara ọgaranya, ndị ọtụtụ n'ime ha bụ ndị India. Rajneesh mepụtara usoro ntụgharị uche na-enyere ndị mmadụ aka ka ha wee nwee ike ịlele usoro ahụ ha, nke uche ha, na nke mmetụta uche ha (Osho [Rajneesh] 1983).
Okwu onu na mgbe ufodu edeputara aka na onyinye ya wetara ufodu ndi odida odida anyanwu na ugwu ugwu. Abu ntụgharị uche ogige Acharya Rajneesh duziri ngwụcha 1960 na mbido 1970. Na 1971, Abụ m Ọnụ Gatezọ .má bụ nke mbụ n'ime akwụkwọ Rajneesh nke ebipụtara n'asụsụ Bekee ma nke a mere ka ụwa niile nwee mmasị. Dika ndi mmadu nwere ike imeghari, ndi America, ndi Australia, ndi England na ndi West West gbakotara na ulo ya nke ikuku Bombay wee gbazite ulo ndi di nso. Ọtụtụ n'ime ndị na-efe ya laghachiri ụlọ iji malite ebe ntụgharị uche, ụlọ nri na Rajneesh discos na Australia, Western Europe na United States.
Na 1971, Rajneesh gbanwere aha Acharya maka Bhagwan sara mbara karị, na-egosi nke nwere nghọta ma ọ bụ edemede. Na nke mbụ ya, Rajneesh kwetara na ya enwetala nnukwu ihe enweghị ezigbo ihe ọmụma satiri na-eweta nghọta, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ tupu mgbe ahụ na Machị 21, 1953. Ọtụtụ ndị America na ndị Western Europe ghọrọ ndị na-efe ofufe na onye ọrụ gọọmentị, usoro nhazi dị iche pụtara (Carter 1990: 69) -70).
Rajneesh na-enyekarị ndị na-efe ofufe Western aha ọhụrụ nke chi na chi nwanyị ndị Hindu na-asọpụrụ, na-egosi ntụgharị uche nke mmụọ na mmụọ ha. N'ime oge a na Bombay, ọ rịọkwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha eyi uwe oroma saffron nke metụtara ndị nwoke dị nsọ na India. Aha na uwe na-egosi ịdị nsọ ozugbo, yana echiche amamihe nke Rajneesh na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke mmekọahụ, kpasuru ndị obodo ahụ iwe, ebe ndị Western na-achọ ịba ụba, ndị bidoro karịa ndị India bịara Rajneesh. Aha ya dị ka onye mmụta dị egwu, nkà ihe ọmụma ya, na narị otu narị ndị nwere ikike ọdịda anyanwụ bụ ndị na-eme ka mgbakọ ndị India jikọtara ọnụ iji mee ka esemokwu na obodo gbara ya gburugburu (Goldman 1999: 22-23).
Na 1974, Rajneesh weghaara isi ụlọ ọrụ ya na Pune Ashram, 100 kilomita na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Bombay. Na-akwado nkwado dị ukwuu site na onye nketa na-ebugharị Gris na nkwado ego site n'aka ndị na-efe India ogologo oge, Bhagwan kwagara na mbara ala isii wee nweta ezigbo ụlọ na mpaghara ndịda, Koreagon Park. N'ime afọ ise sochirinụ, Shree Rajneesh Ashram toro na-agụnye ụlọ ntụgharị uche ebe onye nkuzi ime mmụọ nwere ike ịgwa ọtụtụ puku mmadụ okwu, obere ụlọ nzukọ, ụlọ ọrụ maka ọtụtụ usoro ọgwụgwọ mmadụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ ụlọ, ụlọ nri, ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ, na ụlọ maka ndị na-efe ofufe bi na Ashram (Milne 1987: 23).
N'oge a, Rajneesh gbanwere uwe ogologo ya na uwe ogologo ya, uwe na-acha ọcha na-acha ọcha nke mere ka ọ dị iche na ndị niile na-efe ya na-eyi oroma ma mesịa nwee ụdị uhie, oroma na pọpụl nke ọ kpọrọ ọwụwa anyanwụ. na agba. Ọ gaghịzi enwe ike iso ọtụtụ ndị na-efe ya na-enwe mmekọrịta kwa ụbọchị, mana ọ nọ ebe niile na Ashram site na foto na -ejupụta na asịrị nke oge ụfọdụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ ga-ezute na onye na-etinye aka na faịlụs. Tụkwasị na nke ahụ, darshans nke mgbede ebe Rajneesh zara ajụjụ ndị e dere ede nyere ha ezigbo ihe atụ, dị ka omume ya nke igosi ndị ọbịa dị mkpa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọbịa ọ bụla na-apụ ogologo oge nwere onyinye nke obere igbe osisi ma ọ bụ mpempe uwe ya.
N'oge elu nke mmegharị ahụ na 1976, ihe dị ka ndị 30,000 Westerners gara Shree Rajneesh Ashram kwa afọ, na njem zuru ụwa ọnụ gụnyere ihe karịrị 25,000 ndị na-efe ofufe (Milne 1987: 23; Carter 1990: 59–60). Otú ọ dị, mgbe 1976 gasịrị, ndị mmadụ na-abanye n'ọrụ na-ahapụ ọtụtụ ndị pụọ na njem ahụ. Richard Price nke Esalen Institute dere otu edemede na Time Magazine ịkatọ ime ihe ike na ìgwè ọgwụgwọ Rajneesh (Anderson 1983: 299-302).
Gọọmentị India nyochara ebubo nke ịgba akwụna Rajneesh kwadoro, ịzụ ahịa ọgwụ mba ofesi, ịchụ ahịa ọla edo, ịgbanye ego, na ịgbanahụ ụtụ isi. Ọ ghaghị ịkwụghachi ụtụ isi dị ka onye nkụzi gbanwere agbanwe dị ka onye nkụzi okpukpe. Na 1981, onye okpukperechi Hindu gbalịrị ịkwado onye isi ala.
Esemokwu a dị elu site na 1976 ruo 1981 mere ka Rajneesh kwalite ịkwaga United States (Fitzgerald 1986: 300-05). Ma Anand Sheela, nwanyị di ya nwụrụ nke onye na-eso ụzọ ọjọọ, gbanwere odeakwụkwọ mbụ ya wee kpezie n'etiti Rajneesh na ndị otu ya. Na June, 1981, onye guzobere ya na ndị gbara ya gburugburu gbagara New Jersey, ebe Sheela biri n'oge kọleji ma mechie Ashram, n'agbanyeghị na obere ndị ọrụ nlekọta nọ.
Na Julaị 1981, ndị nnọchi anya Rajneesh zụrụ Big Muddy Ranch buru ibu dị kilomita anọ na Central Oregon wee bido iwu ụlọ.
Rajneeshpuram. Ọtụtụ ndị na-efe ofufe biri na Rajneeshpuram sitere na United States, n'agbanyeghị na e nwere obere ndị agha sitere na Western Europe, Australia, na India. Ha choro otutu ndi mmadu bi na ha bu kwa ebe ndi njem na ndi njem nleta. Ndị ọrụ na-arụ ọrụ elekere na-ewu nnukwu ntụgharị uche na ụlọ nzukọ nkuzi na nnukwu ụlọ ahịa na-emeghe ikuku na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ ahịa akwa, na ebe a na-ere akwụkwọ na-ere ọtụtụ narị akwụkwọ na ihe nkiri vidio site na Rajneesh. Otu obere ọdụ ụgbọ elu, ahịrị nke ahịhịa ndụ, na ọdọ mmiri na-egbukepụ egbukepụ bụkwa akụkụ nke mbara ala (Goldman 1999: 31-36).
N'ime afọ atọ mbụ ya na Oregon, Rajneesh laghachiri na ntụgharị uche nkeonwe ma soro naanị ndị ọrụ aka ya na-ekwurịta okwu ozugbo, na-ekenye mkpebi niile nhazi na mmekọrịta ọha na eze na odeakwụkwọ ya, Sheela. Agbanyeghị, n'ehihie ọ bụla Rajneesh ji nwayọ chụpụ otu n'ime ọtụtụ Rolls Royces ya site na ngalaba ya, na-ekwupụta nwayọ na-ekwupụta usoro nke ndị na-efe ofufe ka ha hulatara ma debe Roses n'elu mkpuchi ụgbọ ala ya.
Iji nwee ike ọchịchị ime obodo na obodo kachasị nso, Rajneeshees biri na Antelope, kilomita iri na asatọ site na Rajneeshpuram. Ndị na-efe ofufe tozuru oke maka mmụba ụtụ isi mpaghara nke mere ka ndị lara ezumike nka pụọ ​​n'ụlọ ha na Antelope. Na 1982, Rajneeshees chịkọtara ntuli aka nke obodo wee degharịa Antelope dị ka Obodo Rajneesh. N’ụzọ ụfọdụ, nke a bụ ahịa na-azụ ahịa, n’ihi na ka mmegide na-eto na steeti ahụ niile n’ihi mgbasa ozi banyere Antelope, ndị Rajneeshees mere atụmatụ nzuzo na-enweghị isi ịhapụ obodo Rajneesh ma ọ bụrụ na steeti mee Rajneeshpuram ka ọ bụrụ obodo iwu.
Mgbasa ozi na-adịghị mma na mmegide a na-ahazi site na Puku Pụrụ Iche nke Oregon na ndị ọzọ toro n'ụzọ dị egwu mgbe ekwupụta okwu ọhaneze ọ bụla nke Sheela, ọkachasị na-esochi iwe ya na mba. Nightline gosi. Ọtụtụ nde ndị America nụrụ ka ọ na-ebu amụma na n'ime otu narị afọ, steeti Oregon agaghị adị, mana obodo Rajneeshpuram ga-enwe ihe ịga nke ọma. FitzGerald: 248-49)). Dị ka ọnụ na-ekwuchitere Rajneesh, Sheela kwara ndị ọrụ ugbo Wasco County, ndị na-azụ anụ ụlọ, na ndị omebe iwu aka ọjọọ dị ka ndị ọchị na ndị isi n'ihi enweghị nkwanye ugwu ọdịnala ha na njikọ okpukpe okpukpe Judeo-Christian ha. Na 1983, obere Hotel Rajneesh dị na Portland tụrụ bọmbụ. Agbanyeghị na enweghị ọnwụ ma ọ bụ mmerụ ahụ dị egwu na ogbunigwe ahụ nyere ihe ziri ezi maka ịbịnye ndị uwe ojii Rajneeshpuram site na egbe na-akpaghị aka na ndị helikopta na-enyocha. Ọtụtụ ndị Oregoni kwenyere na bọmbụ ahụ bụ naanị aghụghọ ọha na eze na ihe ngọpụ iji gbochie ọrụ na-abaghị uru, n'ihi na ha amaghị ndị uwe ojii ji egbe na Rancho Rajneesh.
Echiche bụ isi na 1983 esiteghị n'aka Rajneeshees ma ọ bụ ndị nkatọ ya. Otu nwoke, Oregon Attorney General David Frohnmayer nyere iwu banyere iwu ma gbaa akwụkwọ na-esote ikpe nke na-ama aka na ntinye nke Rajneeshpuram n'ihi mmebi nke nkewa nke Iwu nke Churchka na Ọchịchị. Ikpe a mere ka Rajneeshuram maa jijiji ma meghee ụzọ maka ọdịda udo ya.
N'ihe ikpe ahụ, Rajneeshees mepere oghere ntuli aka sara mbara karị na Wasco County. Na Septemba, 1984, mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ gosipụtara mbọ Sheela na-eme iji weghara ihe karịrị otu puku ndị na-enweghị ebe obibi dị ka ndị ọhụrụ bi na Rajneeshpuram. Ndị odeakụkọ kọwara nke ọma gbasara ọchichọ ya ime ka ọnụ ọgụgụ ndị prone Rajneesh na-atụ vootu wee chịkwaa ntuli aka Wasco County. Ezubere atụmatụ a iji rụọ ọrụ na bioterrorism na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na nnukwu ụlọ ahịa na mpaghara Wasco, n'ihi na Sheela chọrọ ijide n'aka na ndị ịtụ vootu Rajneeshee nwere ọmịiko ga-akarị ndị na-emegide ya bụ ndị ga-arịa ọrịa nke ukwuu iji gaa ntuli aka ahụ. Atụmatụ ahụ kụrụ afọ n'ala n'ihi na steeti ahụ lebara anya na ndebanye aha ndị ntuli aka ma maa ọkwa mbata ndị bịarutere n'oge na-adịbeghị anya. Ndị na-azọ ọkwa pro-Rajneesh kwụsịrị na ntuli aka ahụ na Sheela hapụrụ atụmatụ ya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọbịa 1,500 na-enweghị ebe obibi hapụrụ Rajneeshpuram n'ime ọnwa ole ha rutere. Mgbe nsogbu ntuli aka ahụ gasịrị, dibia Rajneesh, onye mechara bụrụ Pune Meditation Resort na ndị ọrụ Osho ruo afọ iri atọ, gwara guru ya banyere ihe efu nke aghụghọ nke ndị ntuli aka na mmebi nke esemokwu na-enweghị njedebe na ndị si mba ọzọ.
N'oge na-adịghị anya tupu Ememme 1985 nke ọnwa July, Rajneesh malitere inwe mmekọrịta dị ukwuu na ndị na-eso ụzọ ya wee malite ikwu okwu n'ihu ọha otu ugboro ọzọ, Sheela hụrụ ihe odide ahụ na mgbidi wee pụọ maka West Germany otu ụbọchị tupu guru katọọ ya na Septemba 1985. N'oge na-adịghị anya, a kpọghachitere ya na United States, bụ ebe ọ mara ikpe ọtụtụ ebubo ma jee ozi iri abụọ na itoolu ọnwa ole na ole n'ụlọ mkpọrọ obere nchekwa Federal tupu ọ hapụ mba ahụ iji zere ikpe mpụ na-akwado na State nke Oregon. O biri na Switzerland ma mesịa hibe ụlọ ndị nlekọta abụọ maka ndị agadi na ndị nwere nkụda mmụọ.
Ka oge na-aga ọdịda ahụ, guru mụtara banyere akwụkwọ ikike Federal na-abịanụ maka njide nke ya ma pụọ ​​na nzuzo. Ndị isi gọọmentị etiti jidere ya na obere ndị otu ya mgbe ha rutere ịwụ mmanụ ụgbọ mmiri Lear Jet na-aga Bahamas. Rajneesh hapụrụ United States ihe na-erughị izu abụọ ka ejidere ya, na-edeghị asọmpi ọ bụla na-arịọ arịrịọ abụọ maka mpụga mbata na ọpụpụ na ịkwụ ụgwọ na ikpe na-akwụ ụgwọ maka $ 400,000). Mgbe ọ hapụrụ mba ahụ, e debere Big Muddy maka ọrịre, obere ndị ọkpọ ọkpọ nke ndị na-efe ofufe tụgharịrị ọkụ na utopia. Ranch mechara ghọọ ogige ndị ntorobịa Ndị Kraịst nke Young Life na-arụ.
Ndị bi na Wasco County bi na Antelope na Dalles na mmalite 1980s na-echeta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ise nke esemokwu na mmekpa ahụ. Ihere mechiri ndị mmegide ahụ, yie ha egwu, ndị bi Antelope lara ezumike nká funahụrụ ụlọ ha n'ihi na ndị Rajneeshees tozuru oke ịrị elu nke ụtụ isi obodo. Offọdụ ndị metụtara ọrịa salmonella na Dalles na-arịa ọrịa nri afọ iri atọ ka nke ahụ gasịrị. Ndị na-enweghị ebe obibi na-enweghị ebe obibi na-echeta ntu oyi na mmerụ ndị ọzọ mere mgbe a chụpụrụ ha na Rajneeshpuram n'etiti etiti. Ọzọkwa, ihere na ọtụtụ ndị isi obodo na ndị mpaghara nwere ma mụta banyere mbọ igbu mmadụ nke mere ka ha nwee obi mmụọ na-adịgide adịgide
Ọtụtụ narị ndị na-efe ofufe tara ahụhụ. Na Rajneeshpuram, ole na ole n'ime ndị Rajneeshees bara ọgaranya tụfuru ọtụtụ narị puku dollar nke ha tinyere na ahịa nke kwesịrị ịdịru mgbe ebighị ebi. Ndị ọrụ na ndị ọrụ faịlụ nwere mmerụ ahụ na-adịgide adịgide n'ihi ọrụ ndọghachi azụ na ndị ọrụ ihe owuwu na ụbọchị elekere iri na abụọ n'ọhịa na ụlọ griin haus. Ọtụtụ ndị na-efe ofufe nọpụrụ iche na ụlọ ọgwụ Rajneesh ma ọ bụ jiri ọgwụ na-enye ọgwụ psychotropic. Ma ka Sheela gbalịrị ijigide ike ya, dọkịta nke Rajneesh nọ n'ụlọ ọgwụ ruo izu ole na ole na Bend n'ihi na otu n'ime ndị aghụghọ ya tinyere ya nsị na nsị ka ọ na-agba egwu n'oge ememme ọkọchị.
Arụmụka ka na-ada ụda n'ime na n'èzí mmegharị ahụ banyere onye mere onye na onye kpatara ya. Ajuju a na-agagharị bụ ma Bhagwan maara banyere ọtụtụ atụmatụ Sheela na mpụ na Rancho Rajneesh. Nkwenye siri ike nke guru na ọ maghị ihe ọ bụla nke omume ọjọọ Sheela zọpụtara ya na ikpe ndị omempụ buru ibu ma eleghị anya chekwaa usoro ya.
Mgbe Rajneesh kwurịtara arịrịọ ya, ya na obere ìgwè nke ndị ji akụnụba bara ọgaranya gazuru ụwa niile iji chọta ebe iji mepụta obodo ọhụụ ọhụrụ. O biri na obere oge na Saịprọs wee soro ndị gọọmentị India nwee mkparịta ụka wee kwụọ ụgwọ ụfọdụ ya na mbụ iji laghachi na Pune / Poona Ashram ochie. Ndị na-efe ofufe rụzigharịrị ụlọ, ubi Zen, ọdọ mmiri na isi mmiri. Rajneesh kọwara njem nke Oregon dị ka ahụmịhe mmụta dị mkpirikpi ma ọ gara n'ihu wezuga onwe ya na mbibi ahụ site na ịgbanwe aha ya na Osho Rajneesh wee bụrụ naanị Osho.
Ndị na-efe ofufe na-achọpụtakarị ihe sitere na Osho n'okwu William James "oke osimiri," nke pụtara na ọ ga-agbanwe n'ime ndụ mmadụ niile, na okwu ndị ọzọ, ịdị n'otu na ihe niile dị. Ha mara na Osho bukwa ihe pụtara “Onye a gọziri agọzi n’eluigwe onye ọ bụ n’eluigwe.” Ndị ọzọ na-ede na Osho sitere n’asụsụ Japanese, na-egosi nnukwu ekele na nkwanye ùgwù maka onye na-agbasawanye nghọta (Jina 1993: 53–54). Dị ka ihe niile gbasara Osho Rajneesh, aha ya n'onwe ya kpatara esemokwu mbụ. Enwere ike ịkọwa ya nke ọma ka ọ bụrụ onye nkuzi ntụgharị uche a na-asọpụrụ (Jina 1993: 54).
Mgbe Osho nwụsịrị na mbido 1990, ọchịchị nke Ashram na nzukọ zuru ụwa ọnụ dara n'ime iri abụọ na otu ndị ofufe Osho ji aka ya họpụta. Agbanyeghị, ọ dịkarịa ala mmadụ iri na asaa n'ime ha akwụsịla site na 2012. Naanị mmadụ atọ nọ n'ime ime Osho na Ashram bụ ndị na-elekọta nzukọ a ugbu a, mmadụ abụọ ọzọ nọ na Board na-achịkwa Ashram na ntọala nke nwere ikike nwebisiinka ọrụ Osho. Dọkịta eze na odeakwụkwọ nke ikpeazụ ya gbara arụkwaghịm ka ha bụrụ ndị nkuzi kwụụrụ onwe ha ma ọ bụ bido ebe ndị ọzọ. Isi ụlọ ọrụ ọzọ bụ Oshodham, nke dị kilomita iri atọ na ndịda Delhi. Ọ na-enye ntụgharị uche na ememe maka ndị ọbịa na otu ahụ na-ebipụta Osho World n'ịntanetị, na-elekwasị anya na Osho na ihe nketa ya. N’aka nke ọzọ, nzukọ na Pune Ashram na-ekwusi ike na nkà ihe ọmụma Osho na atụmatụ maka uto onwe onye.
Mgbe Osho nwụsịrị, enwere nsogbu atọ dị mkpa n'etiti kọmitii nke ndị isi iri abụọ na otu. Nke mbu, ndi isi ato, Amrito (Osho dibia nke Onwe) na umu nwoke abuo, Jayesh na Yoganenda, weghaara ego Ashram na akwukwo Osho site n’aka Osho International Foundation. Nke abuo, ndi mmadu na-elekwasị anya n'echiche nke Osho ma jiri nwayọọ nwayọọ degharịa Pune Ashram iji kpochapụ ihe oyiyi na ihe ncheta nke Osho, gụnyere Samadhi wuru iji sọpụrụ ncheta ya. Nke ato, ha weputara ndi nleta bara ọgaranya ma belata ozi ime mmụọ nke ebe a na-elekwasị anya na uto onwe onye site na ntụgharị uche siri ike. Ndị na-ekwenye ekwenye na-ebo ndị isi atọ ebubo na "Bollywoodization" nke Osho.
Fọdụ n'ime ndị nkatọ a gbara akwụkwọ na akwụkwọ ikike Osho Foundation International nke aha Osho, ntụgharị uche na mbipụta ya. Ulo ikpe ikpe nke United States na Trademark Copyright Board kpebiri na ndi oru Osho dika Oshodam na akwukwo ya Osho World nwere ike iji aha ahụ “Osho” ​​n'ihi na ọ dị otú ahụ “Jizọs.” Olọ ọrụ Osho dị n'etiti, Osho International Foundation, jigidere ikike nke mbipụta nwebiisinka.
Na 2014, ndị isi atọ nke Osho International Foundation nke dị ugbu a na Zurich kwuru na ha achọtala uche nke nyere ha njikwa ego nke nzukọ ahụ. Kaosiladị, ndị ọkachamara Switzerland onwe ha kwuru na ọ bụ nke ụgha, ọ meghere ụzọ maka nyocha zuru ezu. Na June nke 2014, Federal Supervisory Board, ụlọ ọrụ nke Ngalaba Na-ahụ Maka Mpụga nke Switzerland, wepụrụ ndị niile nọ na kọmitii nke Osho Foundation International, gbochie akaụntụ Switzerland ha, ma họpụta otu ndị nlekọta nọọrọ onwe ha iji nyochaa ntọala ahụ . Ndị nlekọta ahụ chọpụtara na mmadụ atọ dị mkpa n'ime ochie gbara gburugburu ọkara nke ọkara nke ntọala Foundation n'afọ gara aga. Enweela ịgba akwụkwọ na-aga n'ihu, ọzọkwa, Osho Movement nọ na esemokwu. Agbanyeghị, mgbe ọnwa ole na ole gachara, ndị nlekọta ahụ nabatara mkpesa ma weghachite Board.
N'agbanyeghị esemokwu na ịgba akwụkwọ, narị afọ nke iri abụọ na otu Osho Meditation Resort ka na-egwu egwu, ntụgharị uche ọhụụ mepụtara, na ọtụtụ mmadụ nke na-enye usoro ọmụmụ dị iche iche na otu uto nke onwe. The Osho Movement anọgidewo dị ka otu ìgwè ndị ahịa na-adịghị eleta Pune Ashram ma ọ bụ Oshodham, gụọ akwụkwọ Osho, ma tụgharịa uche ọnụ na naanị ha. Ashram ka na-adọta ndị njem bara ọgaranya na-achọ uto onwe ha site na egwu, egwu, na ntụgharị uche. Otú ọ dị, isi ihe kachasị raara onwe ya nye, ọtụtụ narị ndị na-efe ofufe bụ ndị tinyeworo ndụ ha gburugburu Osho na nkuzi ya, nwere ike ịgbanwe ọrụ ha na Oshodham.
Kemgbe 1974 na Pune, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okwu ọ bụla Osho kwuru ka ejiri ikwesị ntụkwasị obi depụta ma bipụtara n'ụdị dị iche iche. Ọ na-atọ ya ụtọ
na-ekwusi ike na e nwere chaplet 108 na ọjọọ na ndị na-efe ya na-eyi ma nwekwaa ụzọ 108 na-eduga na nghọta. N'ihe karịrị akwụkwọ 115, nke bụ ederede okwu nkuzi ya, okwu mbido ya, na okwu pithy, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdịnala okpukpe na nke nkà ihe ọmụma niile ka Osho lebara anya. Ọ kụziri ihe banyere okpukpe Buddha, Iso Christianityzọ Kraịst, Hassidism, Sufism, Upanishads, na Yoga tinyere Marx, Freud, na Henry Ford.
Ndị na-achọ ihe ime mmụọ anaghị aghọta ọdịnala ndị a dị mgbagwoju anya, mana ha nwere ekele maka otu ha si gbakọtara na nri ime mmụọ dị ụtọ na Zen Buddhist niile. Osho kwusiri ike na ọtụtụ ihe ndị na-emegiderịta onwe ha na mgbagwoju anya na nkà ihe ọmụma ya dị mkpa maka mmepe ime mmụọ na ndị na-achọ nwere ike ịhọrọ ịnakwere ma ọ bụ jụ akụkụ ọ bụla n'ime ha.
Na 1970s na 1980s ndị na-efe ofufe nakweere Rajneesh dị ka onye isi kachasị ha. Mgbe Osho nwụsịrị, mmesi ike ahụ ghọrọ ntinye uche na ntụgharị uche na-enweghị isi na mmekọrịta nna ukwu / mmekọrịta ndị na-eso ụzọ, ọ bụ ezie na ọmụmụ nke nkà ihe ọmụma Osho ka dị mkpa. N'agbanyeghị mgbanwe, nkọwapụta, na nkwado nke nhọrọ onwe onye, ​​isi okwu abụọ kachasị mkpa na nkà ihe ọmụma Osho ka dị ịtụnanya na-agbanwe agbanwe. Ha bụ (1) inyefe onwe onye na (2) ntinye nke ihe mmadụ na mmụọ (Osho [Rajneesh] 1983).
Iwu iri nke Osho, nke o depụtara n'oge a ka na-akpọ ya Acharya Rajneesh, anọgidewo na-agbanye ala usoro nke oge a nke dị na Pune Ashram na Oshodham (Osho 2002). N'ikwu eziokwu, Rajneesh hụrụ na ọ na-emegide iwu ọ bụla, mana ọ gara n'ihu (akara aka nke 3, 7, 9 na 10 bụ nke mbụ.):
1. Emebela iwu onye o bula ma obughi na o si n’etiti gi bia.
2. E nweghị Chineke ọzọ karịa ndụ n'onwe ya.
3. Eziokwu dị n'ime gị: achọla ya n'ebe ọzọ.
4. ishụnanya bu ekpere.
5. nothingghọ ihe efu bụ ụzọ nke eziokwu. Enweghị ihe n'onwe ya bụ ụzọ, ebumnuche na nnweta.
6. Ndụ dị ugbu a na ebe a.
7. Na-adị ndụ n'ụra.
8. Egwula mmiri - sere n'elu.
9. Nwua oge obula ka inwee ohuru n’oge obula.
10. Achọla. Nke ahụ bụ, bụ. Kwụsị lee.
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na iwu ndị a niile bụ ntọala kemgbe ihe karịrị afọ iri anọ, enwere ohere dị ukwuu maka ndị mmadụ iji wuo nkọwa nke aka ha. Na-arịwanye elu, usoro ọgwụ ndị a na-edoghị anya na ozizi na omume ndị ndu ime mmụọ ndị ọzọ.
Osho laghachiri ugboro ugboro na ọhụụ ya nke nwoke ọhụrụ nke mepụtara ụwa na ndị nsọpụrụ Chineke. Ihe kacha mma ya mma bụ “Zorba the Buddha, ”nke mejupụtara na ijikọ uche nke mmụọ nke Indian mystic na omume na-anabata ndụ nke Westerner. Zen, ọdịnala Tantra, na ozi Prosperity Gospel gbakọtara na ọhụụ Rajneesh:
A choro mmadu ohuru n’uwa, mmadu ohuru nke na anabata ma onye sayensi na ihe omimi. Onye niile bụ maka ihe niile na mmụọ. Naanị mgbe ahụ ka anyị ga-enwe ike ịmepụta mmadụ, nke bara ọgaranya n'akụkụ abụọ. A na m akuziri unu ịba ụba nke ahụ, ịba ụba nke mkpụrụ obi, ịba ụba nke ụwa a na ụwa ahụ. Nye m nke ahụ bụ ezi okpukpe (Osho [Rajneesh] 1983: 14).
Shozọ Osho dị iche iche bụ ụlọ mkpuchi nke ụlọ nchebe dịgasị iche iche n'ụzọ ime mmụọ. Onweghi otu usoro emume. Otú ọ dị, ntụgharị uche, na-anọgide na etiti omume ahụ na mpaghara ọ bụla nke Movement. Ndị na-etinye aka na ịgbaso Osho na-atụgharị uche kwa ụbọchị ma na-aga ememme ọnụ, mana ndị ọzọ na-anwale ha n'oge nleta na Meditation Resort ma ọ bụ Oshodham ma ọ bụ na-eme omume oge ụfọdụ na mpaghara mpaghara. Fọdụ ndị na-eso ụzọ nkịtị na-atụgharị uche naanị ha site na nduzi sitere na ibe weebụ Osho Meditation Resort.
Osho mepụtara ntụgharị uche anọ na-arụsi ọrụ ike bụ ndị dị na ntụgharị uche ndị ọzọ. Ha bụ Dynamic Meditation, Ntughari Kundalini, Nadabrama Meditation, na Nataraj Meditation. O webatara Ntughari uche di omimi na ogige ntughari obi ya ma o buru ebe ntughari uche. Nkọwa ndị a na-enye ihe atụ nke ụzọ Osho si emetụta onwe onye na nke mmụọ:
Dynamic Meditation nwere nkebi atọ:
Nkeji mbu (Nkeji 10)
Na-eku ume site na imi, ka iku ume dị ọkụ, miri emi, ngwa ngwa, na-enweghị ụda, na-enweghị ụkpụrụ - ma na-etinye uche mgbe niile na ume. Ume ume kwesịrị ịkwaga miri emi n'ime ngụgụ. Mee nke a ọsọ ọsọ na ike dị ka ị nwere ike ime ruo mgbe ị ghọrọ iku ume. Jiri mmeghari ahụ nke ahụ gị nyere gị aka iwulite ume gị.
Agba nke abụọ (nkeji 10)
Gbanyụọ! … Ahapụ ihe niile a chọrọ ka a tụfuo. Soro ahụ gị. Nye aru gi nnwere onwe ikwuputa ihe obula di. Na-ara ara kpamkpam. Tie mkpu, tie mkpu, tie mkpu, wụli elu, maa jijiji, gbaa egwu, na-abụ abụ, na-achị ọchị; tụba onwe gị gburugburu. Ekwela ka uche gị gbochie ihe na-eme. Kpachapụ anya na-ewere ara. Bụrụ ngụkọta.
Nke ato (nkeji 10)
Site n’ibuli aka elu n’elu isi gị, wulie elu ma na-eti mkpu na mantra, “Hoo! Hoo! Hoo! ” dị nnọọ ka o kwere mee. Oge ọ bụla ị rutere, na ụlọ ụkwụ gị, ka ụda hama banye n'ime etiti mmekọahụ. Nye ihe niile i nwere.
Agba nke anọ: Nkeji 15
KWỤSỊ! Ifriizi ebe ọ bụla ị nọ, n'ọnọdụ ọ bụla ị hụrụ onwe gị. Edoziela ahụ n'ụzọ ọ bụla. Ụkwara, mmegharị, ihe ọ bụla, ga-ewepụ ike ume na mbọ ga-efu. Bụrụ onye akaebe nye ihe niile na-eme gị.
Agba nke ise: Nkeji 15
Na-eme ememme! Jiri egwu na igba egwu kwuputa ihe obula di.
Onweghi udiri ejiji ugbua maka ndi na etinye uche ma ewezuga na Pune Meditation Resort, Oshodham na oge ntughari uche na ufodu obodo. Uwe ejiji Maroon nke enwere ike ịzụta ebe a chọrọ ya n'ụbọchị na Meditation Resort. A ga-eyi uwe mwụda ọcha maka ntụgharị uche mgbede. Naanị uwe ojii na-agba mmiri ka a na-anabata na ọdọ mmiri.
Na 1970, mgbe ọ malitere ndị na-eso ụzọ ya na Bombay n'ihu ọha, Rajneesh ghọrọ onye isi nke otu okpukpe ọhụrụ na-adọta ụmụ amaala India na ndị Western Europe.
Omume a toro n'ụzọ dị egwu na mmalite 1970s, mgbe akwụkwọ Rajneesh dị site n'aka ndị nkwusa Bekee na-asụ Bekee. Ka usoro ahụ gbasaa, usoro nhazi dị iche iche malitere. Ma Yoga Laxmi, odeakwụkwọ Rajneesh, gbalịrị itinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na gọọmentị India ka ọ na-emepe usoro nhazi dị iche iche nke na-ahazi nhọpụta, ogbako na nhazi ụlọ.
Na 1974, Rajneesh na nzukọ ya kwagara Rajneesh Ashram ọhụrụ na mpaghara ọmarịcha ala nke Poona / Pune. Rajneesh lekwasịrị anya n'ikwu okwu banyere ozizi na omume ime mmụọ, na-ebi na Ashram nke tinyekwara dọkịta ya, akwa akwa ya, yana onye enyemaka / onye hụrụ ya n'anya. Onye odeakwụkwọ ya na-ahụ maka ọrụ kwa ụbọchị na Ashram, site n'enyemaka nke ndị ọrụ na-eto eto.
Enwere ngalaba maka mmezi, ọrụ nri, mmekọrịta ọha na eze, nlekọta ahụike, ọrụ iwu na mbipụta. Rajneesh na-ekwu okwu kwa ụbọchị, mana uto nke onwe na nke ime mmụọ gụnyere nzukọ na nzukọ dị iche iche nke ọtụtụ "Rajneesh na-agwọ ọrịa" na-eduzi. Ka Ashram na ije zuru ụwa ọnụ na-eto, Laxmi nyefere Ma Anand Sheela (Sheela Silverman) ike, onye mechara weghara ya.
Ejikọtara netwọk Rajneesh zuru ụwa ọnụ, ụlọ ahịa, na ụlọ nkwakọba ihe na njikọ dị na Ashram. Kaosinadị, ozugbo Sheela lekọtara ihe niile gbasara nhazi, ọ chọrọ nnukwu ego na nnukwu ego site na mpaghara mpaghara wee mechie ndị na-abaghị uru. Mgbe ị kwagara Oregon na ọdịda 1981, e nwere ọbụna ịkọkọta ọnụ. Sheela wepụrụ ọtụtụ nkuzi nkuzi nke onwe ya, ndị na-efe ofufe nabatara iwu ya na ịrụsi ọrụ ike maka obodo bụ ụzọ kachasị mma maka uto onwe onye na nke mmụọ. O mechikwara ọtụtụ ebe Rajneesh gburugburu ụwa, agbanyeghị na ụfọdụ gbanwere aha ha wee bụrụ ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ha.
Na Rajneeshpuram, Rajneesh banyere ntụgharị uche nkịtị na ichebe nzuzo, belụsọ maka usoro ịkwọ ụgbọ ehihie n'otu n'ime ya ọtụtụ Rolls Royces. Ọ gosipụtara mmegharị ahụ, mana Ma Anand Sheela na gburugburu ya nke ụmụ nwanyị iri na abuo a na-akpọ "Ndị Nne" na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị ọzọ na-efe ofufe na-achịkwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ruo mgbe Rajneesh malitere ịgwa obere ìgwè okwu n'oge ọkọchị nke 1984. Mgbe nsị ahụ dị na Dalles na atụmatụ dara ada iji kpọbata ndị ntuli aka ọhụrụ maka ntuli aka nke November 1984, òtù ahụ chere nsogbu na-arịwanye elu nke iwu, ịrị elu ụgwọ na ịda mba. Sheela na ndị otu ya bidoro hapụ ike ha wee pụọ Rajneeshpuram ụbọchị ahụ tupu Rajneesh katọrọ ha n'ihu ọha na Septemba nke 1985.
Mgbe Rajneesh doziiri nsogbu ya na United States wee mesịa laghachi Ashram ochie, ọ na-esikwu ike, na-arịa nsogbu obi na ọrịa shuga. Ọrụ na nkwukọrịta kwa ụbọchị dabara n'aka Amrito, onye dibia bekee. Rajneesh họpụtara otu ndị na-efe ofufe iri abụọ na otu ka ha bụrụ ndị dị n'ime ma weghara onye ndu mgbe ọ nwụsịrị. Otutu ike di na Amrito ya na ndi oru ibe ya abuo ma obu ato. Ha guzobere usoro nhazi dị iche iche ma hiwe ụlọ ọrụ na New York na Zurich iji bipụta ma kesaa ọrụ Osho / Rajneesh.
N'ihi ikike ikpebiisinka ya na otu schismatic dị iche iche, enwere ike inwe ntụgharị ndị isi ọzọ n'ọdịnihu dị nso. Ndị ọrụ gọọmentị Osho / Rajneesh ka nọ na Pune Ashram, mana ọtụtụ n'ime ego ha na-enweta sitere na mbipụta. Mmeghari n'onwe ya ejikọtara ọnụ nke ọma na uche ya dị na akwụkwọ Osho na idobe Osho Meditation Resort na Pune.
Ọ bụ nanị okpukpe ole na ole ọzọ lanarịrị ọnwụ nke ndị guzobere ha, gbanwee echiche ndị mmadụ, ma gbakwunye na mmetụta ha zuru ụwa ọnụ. Nke kachasị n'ime ndị a, Chọọchị nke Ndị Nsọ nke Ikpeazụ, na-eme mgbanwe maka esemokwu ya na obodo ndị ọbịa ya, na-agakwuru ọha na eze na okpukpe, ma ghọọ okpukpe nwere ikike na-achịkwa ụwa niile (Stark 1996). Agbanyeghị, obere mmegharị ndị ọzọ, ahapụrụ dị iche iche anwụghị ma nwee ihe ịga nke ọma dịka mmetụta ọdịnala a na-ahụ anya nke na-ewebata ọhụụ ime mmụọ na ọnọdụ ụwa. N'agbanyeghị obere ya, Osho Movement na ịrọ òtù dị n'ime ya na-aga n'ihu na-enwe mmetụta dị ukwuu, ọkachasị site n'akwụkwọ Osho na nhụta zuru ụwa ọnụ nke Meditation Resort.
Esemokwu esemokwu ma ọ bụ esemokwu nke ime obodo emeghị ka ọnọdụ Osho Movement zuru ụwa ọnụ. Onye nchoputa Facebook, Mark Zuckerberg, gara Osho Meditation Resort dị ka ọtụtụ ndị ọkachamara n'oge a, ma ọ dịghị ihe na-egosi ọdịbendị ọdịbendị nke oge a karịa arụsị arụsị Lady Gaga nke 2011:
Oh ee Osho! Aguru m otutu akwukwo Osho na agukwa otutu ihe banyere nnupu isi [nke Osho banyere] nke bu ihe m kachasi nma. Ma otu okike si bụrụ nnupụisi kasịnụ na ndụ. Ọ dị mkpa ịkwụrụ ọtọ maka ihe ị kwenyere na ịlụ ọgụ maka nha anya. Iha nhatanha bụ otu n’ime ihe kacha mkpa na ndụ m - mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndọrọndọrọ ọchịchị, akụ na ụba ya bụ ihe ndị a m na-alụ ọgụ maka obodo m dị ka nwaamaala. Ya mere, m gụrụ Osho n'ihi na ọ bụghị naanị na m hụrụ ọrụ ya n'anya na ihe ọ na-ede banyere ya, mana echere m na m bụ ụdị onye hippie India! (Bhushan 2011).
Nwanyị nzuzu nke Lady Gaga gosipụtara ụzọ ndị iri abụọ na narị afọ mbụ na-achọ mmụọ metụtara Osho site na akwụkwọ, vidiyo, web ngwa, na nleta na Meditation Resort na Pune ma ọ bụ Oshodham. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ bụghị mkpesa Zuckerberg ma ọ bụ okwu Gaga katọrọ site na akụkọ mgbasa ozi. Organizationtù Osho nke dị na Pune emeela ka Osho pụta ìhè na ozi ya site na ịkọwa mbibi Oregon dị ka obere ụzọ. A gbanwere akụkọ ihe mere eme nke mbụ na nke ọma na Osho / Rajneesh ugbu a dịka onye nkuzi mmụọ na-akpali akpali kama ịbụ onye ndu na-adọrọ adọrọ.
Ihe ndi ozo n’ime nmeghari a na egosiputa esemokwu ndi mmadu banyere ihe bu “ezi” okwu. Oshodham na-asọpụrụ Osho / Rajneesh n'ụzọ doro anya ma na-ekwusi ike na nkuzi ya n'oge gara aga, ebe ndị isi na Osho International Foundation ejirila obi ha niile na-ere nkà ihe ọmụma nke Osho karịa onwe ya. Okwu ogologo oge bụ ma Osho Movement nwere ike ịkwagide mkpesa ya zuru oke site na mbọ nke ndị na-eso ụzọ ole na ole.
N'ime oge okwu a, enwere esemokwu nwebisiinka nke mba ụwa na-aga n'ihu banyere ihe ndị na-achịkwa mbipụta nke ọrụ Osho na ntụgharị uche. Na agha ịrọ òtù banyere oke “ezi” nke Osho. Rajneesh / Osho Movement na-aga n'ihu na-abụ hothouse maka esemokwu oge niile, dịka Acharya Rajneesh buru amụma na ọ ga-abụ ihe karịrị afọ iri anọ gara aga.
Anderson, Walter Truett. 1983. Mmiri dị n'elu: Esalen na edemede nke American. Ịgụ, MA: Addison Wesley.
Bhusan, Nyay. 2011. "Lady Gaga Na-ekpughe Lovehụnanya nke Akwụkwọ site n'aka Ọkà Ihe Ọmụma Osho." Hollywood Reporter Online, October 28. Nweta site na http://www.hollywoodreporter.com/news/lady-gaga-reveals-love- na 10 September 2014.
Carter, Lewis F. 1990. Charisma na Njikwa na Rajneeshpuram. New York: Mahadum Cambridge University.
FitzGerald, Frances. N'afọ 1986. Obodo n'ugwu. 1986. New York: Simon na Schuster.
Goldman, Marion S. 1999. Ọsọ Mmasị: Ihe Mere Womenmụ Nwanyị Na-aga nke Ọma Ji Jikọtara Otu Ọgbakọ . Ann Arbor: Mahadum nke Michigan Press.
Jina, Anand. 1993. "Ọrụ Osho Rajneesh: Nkọwa Akpụ." Pp. 47-56 n'ime Akwụkwọ Rajneesh, nke Susan Palmer na Arvind Sharma dezigharịrị. Delhi: Motilal Banardidass, Ltd.
McCormack, Nweta. 1985. Faịlụ Rajneesh: 1981–1986. Portland, OR: Ndị nkwusa ọhụụ Oregon.
Mehta, Gita. 1979. Karma Kola: Marketingzụ ahịa Mystic East. New York: Simon na Schuster.
Milne, Hugh. 1987. Bhagwan: Chineke nke dara . New York: Saint Martin si.
Osho (Bhagwan Shree Rajneesh). 2002. Ebe nrụọrụ weebụ Otoons maka Iwu Iri Osho. Nweta site na http://www.otoons.de/osho/10.htm na 10 September 2014.
Osho (Bhagwan Shree Rajneesh). 1983. Onye na-atụgharị uche kwa ụbọchị: Nduzi Bara Uru. Boston: Charles E. Tuttle.
Ezigbo, Rodney. 1996. “Ihe Mere Okpukpe Na-aga Suga nke Ọma ma Ọ Bụ Ada: Generalkpụrụ Nlegharị Anya.” Journal of Contemporary Religion 11: 133-46.